Published May 4, 2021 at 9:37 PM CDT
Boqortooyada Midowday iyo reer Brazil ee COVID-19 ayaa sidoo kale horey loo aqoonsaday. Noocyadaas waxaa la rumeeysan yahay in si fudud loo kala qaado. Laakiin saynisyahannadu waxay yiraahdaan dhammaan tallaallada la oggolaaday inay waxtar u leeyihiin iyaga.
Gobolka Iowa ma soo sheegin wax dhimasho ah oo cusub sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19 24-kii maalmood ee la soo dhaafay, waxaa jiray ku dhowaad 400 kiis oo cusub oo sagaal kale ay ku jiraan Gobolka Woodbury.
Tirada kiisaska cusub ee fayraska ee Nebraska ayaa hoos udhacay heerar aan la arkin tan iyo bishii Luulyo ee la soo dhaafay laakiin xawaaraha tallaalada ayaa sidoo kale ka gaabinaysa gobolka oo dhan. Nebraska waxay soo tabisay ku dhowaad 1,200 oo kiisas cusub hal usbuuc.
Iowa waxaa lafilayaa in ay aragto qaxooti badan oo dib udajin laga sameeyay gobolka kadib markii madaxwayne Joe Biden uu todobaadkan kordhiyay kabadan laba iyo lixdan kun. Waqtigaan la joogo, gobolka wali ma lahan kaabayaal munaasib ah oo lagu maareeyo awood koror. Taasi waa sida uu sheegayo madaxa xafiiska Iowa ee Adeegyada Qaxootiga, oo leh inkasta oo bayaanka la saxeexay hadana, gobolka waxay u badan tahay inuusan arki doonin koror xoog leh isla markaaba. Iowa waxaa laga yaabaa inay aragto isbeddel ku dhow dhamaadka sanadka.
Degmada Iskuulka Bulshada ee Magaalada Sioux waxay ku dhawaaqday qorshayaal shaqsi ahaan loogu qabanayo qalinjabinta Xarunta Dhacdooyinka Tyson. Dhammaan saddexda dugsi sare waxay qaban doonaan dhacdooyinkooda Sabtida, 29-ka Maajo waqtiyo kala duwan. Sababtoo ah faafida COVID-1p dhammaan ka soo qayb galayaasha waxaa looga baahan doonaa inay xiraan maaskaro. Si loo oggolaado kala fogaanshaha bulshada, arday kasta wuxuu heli doonaa afar tikidh si uu ula wadaago qoyska iyo asxaabta. Waxaa jiri doona durdur toos ah oo loo heli karo si loo daawado xafladaha sidoo kale.
Booliska magaalada Sioux City ayaa sheegay in labo qof loo xiray laguna eedeeyay dilka nin la toogtay ka dib markii uu u soo gurmaday saaxiibtiis oo la…